Xafladii Xisbiga WADDANI ee Finland Daawo SAWIRO | Salaan Media
HELSINKI (SM) Waxa malintii taariikhdu ahayd 31.3.2013 ay ka dhacdey Xaflad si heer sare leh loo soo agaasimey Wadanka Finland Caasimadda Helsinki. Xafladaasi waxa soo qabanqaabiyey Gudiyada Xisbiga WADDANI ee laanta Finland. Ugu horeyn waxa ka Hadley Gudoomiyaha Jaaliyadda Somaliland oo u mahadnaqay dadweynihii ka soo qaybgalay iyo soo dhaweynta.
Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka Somaliland, Waxa kaloo hadal kooban ka jeediyey Gudoomiyaha Xisbiga WADDANI ee Finland Mudane Cabdirahman I. Carte iyo odayaasha Xisbiga oday Faarax Jees, Cabdillahi Xaashi, Siciid Cumar. Waxa kale oo gaabtaasi hadalo qiimo leh oo kooban ka jeediyey Gudoomiyaha Garabka Haweenka Marwo Xaliimo iyo Gudoomiye ku xigeenka Deeqa Xirsi. Xafladan oo aad loo soo agaasimey waxa Gudoomiyaha G. Wakiilada lagu soo dhaweeyey ciyaaraha hidaha iyo dhaqankeena oo jawi aad u qurux badan lagaga mabsuudey goobtaasi.
Waxa lagu magacaabey xilal doora oo loo magacaabey garabka Haweenka ee Xisbiga WADDANI ee Laanta Finland. Ugu dambeyntii waxa goobtaasi hadalo qiimo iyo dhaxagala soo jeediyey Gudoomiyaha Xisbiga WADDANI mudane Cabdiraxman M. A. Cirro oo ku amaaney shaqada iyo hawsha balladhan ee laanta Finland ku tallaabsatey iyo tayada wax ku oolka leh ee ay leedahay,
hasayeeshee wuxu ku gubaabiyey in la isu diyaariyo sidii qayb looga qaadan lahaa kaalinta xubinimo Xisbiga tirooyin intaa ka badanina ku soo biiraan. Ugu dambeyn Gudoomiyuhu wuxu u qaybiyey shahaadooyin lagu godoosiinaayey kaalintii firfircooneed ee ay ku yeesheen Xisbiga WADDANI ee Finland kuwaasoo isugu jira Rag iyo Haween.
Iyo tilmaamidda kaalinta firfircoon ee haweenka xisbiga Laanta Finland.